I-Semalt Shares Persuasive Iingcamango zokujongana nokuhlaselwa iHacking Attacks
Zonke iinkqubo ze-e-commerce zidinga inqanaba elithembekileyo lokukhuseleko. Umnini wewebhu,ukuhlala kude nabahlaseli bangaba yinto ebalulekileyo ebalulekileyo kumsebenzi wakho. Kwiimeko ezininzi, ii-site ezixhasiweyo ziza kuhamba nazoUlawulo lwepaneli yokulawula kunye nedatha echaphazelekayo kwiiwebhusayithi zewebhu. Le ngcaciso ingaquka inkcazelo ebalulekileyo yamakhasimende kunyeidatha yekhadi lesikweletu.
Ukuxhasa iwebhusayithi yakho kungenza into enhle yokwenza. Unako ukufumana ixesha lokubuyaxa kwenzeka yonke inkqubo iya kwi-downline. Ukhuseleko lwengcaciso yakho yomthengi luhlala ezandleni zakho njengewebhusayithi yenkampanilawulo. Ngenxa yoko, uvumela umsebenzi woPhando lweeNjini zoPhando kunye neenkqubo eziza kuhlaselwa phantsi.
uJack Miller, umphathi weMatriki oPhumeleleyo weNtengiso iSemalt ,ichaza ezinye zeendlela zokukhusela iwebhusayithi yakho kubacuki:
Sebenzisa iiphasiwedi ezikhuselekileyo.
Enye yeendlela ezilula ukuqinisekisa ukhuseleko lwewebhusayithi yakho ngokusebenzisaiiphasiwedi ezikhuselekileyo. Zonke i-hacker ziqala ngomsebenzi wokuzama ukuqiqa iphasiwedi. Iiphasiwedi eziqhelekileyo ezinjenge-12345 zikhuselekile kwaye zinokuba ngumntuukuqagela lula. Kukwabulumko ukuba ungasebenzisi amagama angacinga ukuba umntu. Nabani na umntu ofikelela kwiwebhusayithi yakho kufuneka abe nephasiwedi ephephile. AIphasiwedi ebuthakathaka yandisa ubungozi bewebhusayithi yakho kubagculi.
Ezinye iiwebhsayithi ezikhohlakeleyo zingenakucatshulwa kwezinye izinto ezincinci. Xa uyiloisayithi lakho, kubalulekile ukuqesha isakhiwo senkcazo esingenako ukuvumela ukungena kumaphelo ahlukeneyo. Umzekelo omhle yiwebhusayithi ye-PHP.Ezi zizabhsayithi zikhuselekile kangangokuthi phantse nabani na idivayisi ye Linux ngokuqinisekileyo baya kufumaneka kwi database. Ngaphezu koko, izixhobo ezilula ezifana neHavij okanyeI-Framework Execution Framework (BeeF) inokukwazi ukufikelela kwiziko elikude ngaphandle kwemfuneko yokusebenzisa iphasiwedi yomlawuli.
Ukusebenzisa ukukhuselwa kwendawo yokukhusela ii-URL kunokukhusela abasebenzisi bakho ngokubhekiselele kwezinyeiinzame ze-hacks ezilula. I-HTTPS inokunceda umntu ukhuseleko kunye nokhuseleko xa enika ulwazi oluyimfihlo kwiwebhusayithi. Okuuhlobo lwenqabiseko alukwazi nakwezinye iinkqubo zokusingatha i-intanethi. Kwakhona kubalulekile ukunceda abavakashi ngelo hlobo lokhuseleko.
Sebenzisa iifowuni zokhuseleko.
Xa ubamba iwebhusayithi kunye ne-SEO ngokuzenzekelayo, kukho ezinye iiplagi ezingakwaziukhusele ukusebenza kwewebhusayithi yakho. Ngokomzekelo, abanye abantu bangasebenzisa ithuluzi le-BulletProof Security okanye i-Themes Security. Ezi zixhobo zinakoukukhetha nayiphi na ingozi ekukhoyo kwiplani okanye isikhokelo soqwalaselo lwesicelo.
Ukhuseleko lwewebhusayithi kunye nabaxhasi balo bancike ekutheni angakwazi ukuyeka kudebahlaseli. AbaHackers bangabhekisela kumasayithi kwizinto ezahlukeneyo. Okokuqala, bangaba yinkampani yokukhuphisana nokuzama ukuzisa indawo yakhophantsi. Kwamanye amaxesha, banokuba ngabantu abanenjongo ngokucacileyo kodwa banethemba lokungcola ngeendlela eziqhuba ngayo inkampani yakho.Ngenxa yoko, inokuba yinto ebalulekileyo yokuzigcina kude nabahlaseli, ngokukodwa kwi-website yombono. Esi sikhokelo sinokukunceda ukuba ufezekiseoku njengoko wenza ukhuseleko lwendawo yakho. Ngaphezu koko, abathengi bakho bahlala bekhuselekile.